एउटा हिमाली ठिटो, जो सुपरमोडलको सपनामा दौडिरहेको छ... - सिम्रिक खबर
SHERAP GYALTSEN linked_camera
एउटा हिमाली ठिटो, जो सुपरमोडलको सपनामा दौडिरहेको छ...
नामः शेराप ग्यात्सेन लामा
उमेरः २६ बर्ष
उचाईः ५ फिट ११ ईञ्च
जन्म घरः चुन नुब्रि, गोरखा
पर्खौली पेशाः कृषी
अनुभवः राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय गरी करिब १८ बटा शो साथै नेपाली ब्राण्डहरुमा अनुबन्ध ।
सामान्य मानिसले एउटा मोडेलको चिन्तन गर्दा उसले दिमागमा कस्तो स्वरुपको कल्पना गर्ला ? आम मानिस भन्दा फरक । फिल्ममा देखाईने हिरो वा हिरोईन जस्तै राम्रो । अनि सबै कुरामा सम्पन्न । हो, यस्तै लाग्थ्यो शेराप ग्लात्सेन लामालाई पनि । गोरखा जिल्लाको एउटा विकट लेकाली गाउँको ठिटोले स्कूल पढ्दा देखिनै विस्तारै आँफू भित्र एउटा फिल्मको हिरोजस्तै लाग्ने चरित्रको सपना देखिरहेको थियो । शेराप ग्याल्त्सेनले थाईल्याण्ड र मलेशियाका धेरै फेसन रनवेहरु तताईसकेका छन्। गत बर्ष उनी फ्रान्समा अडिसन पास गरेर आएका थिए।
बाटोमा हिंड्दा देखिने फिल्मी पोष्टरका चरित्र र पत्रिकाका पानाहरुमा ठाँटमा देखिने मानिसका तस्वीरहरुले उसको ध्यान खिचिरहेको हुन्थ्यो । तर विदेशीको आर्थिक सहयोगमा काठमाण्डौंको एउटा बुद्धिष्ट स्कूलमा पढिरहेका शेराप ग्याल्सेनका लागि यो कुरा आफ्नो गक्ष बाहिरको थियो । उनका बुबा गुम्बाका लामा थिए, जो उनी ४ बर्षका हुँदा वितेका थिए । परिवारको आर्थिक अवस्था सामान्य थियो । लामा परिवारको माईलो सन्तान, परम्परा अनुसार बौद्ध भीक्षु बन्नुपर्ने हुन्छ । उनको परिवार उनलाई भविष्यको भीक्षुको रुपमा देख्न चाहन्थ्यो । बुवा वितेको केहि समय पछि उनलाई बुबा तिरका नजिकका नातेदारले पढाउन भनी काठमाण्डौ ल्याए । ती नातेदारले यति सानो बच्चालाई भीक्षु बनाउने कुराको प्रतिकार गर्दै सामान्य स्कुलमा भर्ना गरिदिए । ४ बर्षको बच्चा होस्टेलमा बसेर पढ्न शुरु गर्यो । शेरापलाई कुनै अन्जान विदेशीले पढ्नका लागि आर्थिक सहायता प्रदान गरेका थिए ।
लामो स्कूल विदामा उनी आमा भेट्न आफ्नो गाउँ गोरखाको चुमभ्याली पग्थे, जहाँ पुग्न काठमाण्डौंबाट १ दिनको गाडी र ६ दिन हिंड्नु पथ्र्यो । घरमा गएका बेला उनी चौरि चराउने, जंगलमा दाउरा टिप्ने र सिजनका बेला यार्सा टिप्ने गर्दथे । समय आफ्नै रफ्तारमा दौडिरहेको थियो । शेरपले कक्षा १२ को पढाई पुरा गरिसकेका थिए । एउटा लजालु बालक गेरु बस्त्र भन्दा टाढा डिजाईनरहरुले बनाएका स्टाईलिस कपडामा सजिएका मोडलहरुमा डुविरहेको थियो । बढ्दो उमेर र उचाईसंगै उनको स्वरुप कुनै कोरियन युवाको झल्को दिने खालको भयो । साथि-संगीले उनलाई कहिलेकाहिं कोरियन जस्तो भनि कम्प्लीमेण्ट दिने गर्दथे । यस कुराले उनमा भित्रभित्रै एउटा तरङरग ल्याउँथ्यो । संगसंगै एउटा मोडल बन्ने सपना पनि । तर यो सपना मन भित्रै गुम्सीएको थियो । शेराप काठमाण्डौंको किङ्स कलेजमा ब्याचलर्स डिग्री पढ्दै थिए । दिउसो एनजीओमा काम गर्थे । बसाई चाहिं स्वयम्भूमा थियो । स्वयम्भूमा बस्दा धेरै विदेशीहरुसंग भेट हुन्थ्यो । उनलाई सबैले तिमी राम्रो छौं अनि तिम्रोे अनुहारको बनौट मोडलको जस्तो छ भनी प्रेरित गर्दथे । फुर्सदमा फेसबुक स्क्रल गरिरहँदा मिस्टर एण्ड मिस ग्ल्यामरस आईकन सिजन २ हुँदै रहेछ, त्यसमा उनको नजर पर्यो । कसैलाई केहि नभनि अडिसन दिन चुपचाप हिंडे शेराप । मनमा धरै कुरा खेल्यो, धनी मान्छे मात्र जाने हुन की ? हाई फाई देखिनु पर्ने हो की ? १५ मिनेट जति गेटमा उभीएर सोंचेपछि उनी अडिसनका लागि भित्रछिरे । बरिपरि सबै कन्टेस्टेन्टहरु ‘बिग सट’ जस्ता देखिन्थे ।
शेरप ग्याल्त्सेनले थाईल्याण्ड र मलेशियाका धेरै फेसन रनवेहरु तताईसकेका छन् । गत बर्ष उनी फ्रान्समा अडिसन पास गरेर आएका थिए ।
उनलाई अस्ट्रियाको मोडलिङ एजेन्सीले पनि बोलाएको छ । भलै यस्ता अफरहरु आएपनि उनलाई कहिलेकाहिं नेपाली पासपोर्टको स्टाटस र भीषाले भने समस्या पार्ने गरेको छ । सन् २०१८ को पहिलो दिन थियो, जिन्दगिमा उनी पहिलो चोटी र्याम्पमा हिंडिरहेका थिए । यहिं हिंडाईले उनलाई बेष्ट मोडेलको उपाधि दिलायो । यस प्रतियोगितालाई दिक्पाल कार्कीले कोरियोग्राफ्री गरेका थिए । यसपछि भेटीने सबै जनाले उनलाई र्याम्पमा हिंड्न हौसला दिए । उनले बल्ल मोडलिङ बुझ्दै गए । यसैविच उनले मिस्टर काठमाण्डौ प्रतियोगितामा दुईवटा टाईटिल समेत हात पारे । फोटोग्राफर कमल क्षेत्रीले उनलाई अब अन्तराष्ट्रिय प्ल्याटफर्ममा प्रयास गर्न सल्लाह दिए । उनलाई ईन्टरनेश्नल रनवेको स्वाद लिन मन लागिरहेको थियोे । बैंककमा अल्चीच्युड म्यान ईन्टरनेश्नलको कन्टेस्ट हुन लागेको रहेछ । जहाँ डेनमार्क, रसिया, क्यानाडा लगायत १२ देशबाट मोडलहरु भाग लिन आएका रहेछन् । ति सबै प्रोफेसनल मोडलहरु थिए । शेराप अलिकति हच्कीए । कताकता डरपनि लाग्यो, म जोकर हुने त होईन भनेर । त्यो एक हप्ताको कम्पीटिसन थियो । यस प्रतियोगितमा जानका लागि उनलाई गोरखाको चुननुवे गाउँपालिकाले आर्थिक सहयोग गरेको थियो । जुन उनको जन्म गाउँ हो ।
पहिलो दिन भएको सबै १२ जना मोडलहरुको फोटो सुटलाई सामाजिक सजालमा राखियो । शेरापको फोटोमा सबैभन्दा धेरैले पोजेटिभ कमेण्ट दिए । त्यसपछि उनको धडकन केहि कम भयो । अन्तिम फाईनलमा उनले बेस्ट स्टाईलिस मोडलको उपाधी जिते । प्रतियोगीता भर स्टेजमा उनलाई नामले होईन देशको नामले बोलाईन्थ्यो, जुन उनलाई झनै मिठो लाग्यो । सन् २०२० सम्म आईपुग्दा उनले नेपालमै सय भन्दा बढी अडिसन दिईसकेका छन् भने विदेशमा २ सय भन्दा बढी । उनलाई आँफू नेपालमा भन्दा विदेशमा बढी विक्छु भन्ने लाग्छ । अझ बेसी युरोपमा । भन्छन्, युरोपमा मेरो जस्तो चिंकी आईज भएका मोडलको डिमान्ड छ ।
शेरप ग्याल्त्सेनले थाईल्याण्ड र मलेशियाका धेरै फेसन रनवेहरु तताईसकेका छन् । गत बर्ष उनी फ्रान्समा अडिसन पास गरेर आएका थिए । उनलाई अस्ट्रेलियाको मोडलिङ एजेन्सीले पनि बोलाएको छ । भलै यस्ता अफरहरु आएपनि उनलाई कहिलेकाहिं नेपाली पासपोर्टको स्टाटस र भीषाले भने समस्या पार्ने गरेको छ । यि कुराका बाबजुद पनि उनि भन्छन् ‘अबको मेरो लक्ष्य भनेको न्यूयोर्क फेसन विक र पेरिस फेसन विकको नै रनवे हो ।’ उनी आँफैलाई भविष्यमा सुपरमोडलको रुपमा देख्न चाहन्छन् ।
Follow Sherap Gyaltsen